မိမိလက်နှင့် var ဥယျာဉ်တော် - အစားထိုးရန်အဘယ်အရာကိုအိမ်မှာနေတဲ့စာရွက်,
သင်၏လက်နှင့်အတူဥယျာဉ်တော် var ပြင်ဆင်ထားရန်, သင်စာရွက်ကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ truckers အေးဂျင့်အကြားဒါဟာပေါ်ပြူလာကုသမှုနှင့်သစ်ပင်အပိုင်းအနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာသေးငယ်တဲ့ခြစ်နှင့် recessed ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။
မိမိလက်နှင့် var ဥယျာဉ်တော်
အကာအကွယ်ဥယျာဉ်ကို PuTTY ကိုအလွယ်တကူစတိုးဆိုင်မှာဝယ်ယူသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပါစေ။ လက်မှာဘယျအရာပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးရောနှောပြင်ဆင်လော့။ အများသောရေးစပ်ထားတဲ့ချက်ပြုတ်နည်းများသည်အတိုင်းဖျော်ဖြေခံရဖို့အိမ်မှာပြင်ဆင်မှုဥယျာဉ်ကို vara ။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့အခြေစိုက်စခန်း, ကတော့ပုံအသီးသီးသော၏ပျားဖယောင်းသို့မဟုတ်ဗဓေလသစ် rosin ပြုမူကြောင်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဥယျာဉ် var လိုအပ်သလဲ?
smear မှို, ဘက်တီးရီးယား, ကပ်ပါးကောင်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ဆုံးရှုံးမှုရည်မှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးရန်သစ်ပင်များ၏အနာပေါ်ထုတ်ယူသွားတတ်၏။ ၏ရလဒ်အဖြစ်ထိုအရပ်၌ရပ်ပျက်စီးမှု:
ဥယျာဉ်တော် var ချက်ချင်းဘေးဒဏ်သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းမှအင်္ဂတေလျှောက်ထားသည့်အခါ, ဒါပေမယ့်ရသောအခါဖြတ်အနည်းငယ်ခန်းခြောက်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်အမှုအရာကိုရှုတ်ချပါဘူး, နဲ့ off လဲကြပါဘူးပွငျဆငျပွီးထိုကဲ့သို့ PuTTY ၏အကိုင်းအခက်များနှင့်စည်အပေါ်လျှောက်ထားရန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုအစိုဓာတ်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် overdrying အနာတားဆီး။ အဆိုပါပူနွေးလအတွင်းပိုကောင်းကပြန့်နှံ့ - ဆောင်းဦးသို့မဟုတ်အစောပိုင်းနွေဦး၏အလယ်တွင်ရှိရာသီဥတုခြောက်သွေ့တဲ့ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်မှာနေတဲ့ဥယျာဉ်တော် var အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
teplozhidkie (အသုံးမပြုခင်သူတို့နွေးဖြစ်ရမည်) နှင့်အအေးယဉ် (ပါဝင်သည်အရက်အရောအနှောအတွက်) - PuTTY အားလုံးနှစ်မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ဥယျာဉ်တော် var, ကိုယ်လက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ teplozhidkih ဆီ:
ကြော်ကိုအခြေခံပြီးဖယောင်း paraffin -6ရှယ်ယာ rosin -3ရှယ်ယာ, ဟင်းရွက်ဆီ -2အစိတ်အပိုင်းများ။ Paraffin အရည်ကျိုသည်ကဒဏ်ငွေ rosin ကဆက်ပြောသည်။ Podmazki အပူ, ရေနံ 30 မိဘို့ကဆက်ပြောသည်နှင့်ပြုတ်သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်အအေးနှင့်ယူနီဖောင်းအထူသည်အထိ kneaded ။
ကြော်ကိုအခြေခံပြီးဖယောင်း: rosin -4ရှယ်ယာ, သွင်းကုန် -2ရှယ်ယာ visceral အဆီ - 1 ရှယ်ယာ။ အဆိုပါဖယောင်းအရည်ကျိုသည်က 20 မိနစ်အဘို့အပြုတ်အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများ, အအေး, kneaded ဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလက်နှင့် var ဥယျာဉ်တော် - တစ်စာရွက် Zhukovsky: သွင်းကုန် - 1 ရှယ်ယာ rosin - အဆီ၏ 1 ရှယ်ယာ - 1 ရှယ်ယာ။ မတူညီတဲ့အရည်ပျော်ခွက်၌ components များနှင့်ရောနှောသို့သွန်းလောင်းလေ၏။ အေးမြသောရေရရှိမှုသီးခြားခွက်၌ကခြံ var သို့သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းယူလိမ့်မည်သည့်အခါကရေထဲကနေဖယ်ရှားနှင့်ရတဲ့အရာတွေစက္ကူကျင်းပတဲ့ပူဖောင်း, ဖွဲ့စည်းထားသည်။
, elastic အပူမအက်ကွဲနှင့်ချမ်းသောကာလ၌ခိုင်မာစေ - အေးယဉ်ဥယျာဉ်ကိုပြောင်းပါ။ ချက်ပြုတ်နည်းများ၏ဥပမာ:
ကြော် Resetnicov: ထင်းရူးစေး - 10 ပိုငျး, အဝါရောင်ဖယောင်း - 1 အချိုးအစား, ethyl အရက်သေစာ - 1 အချိုးအစား။ ဖယောင်းများနှင့်အစေးအရည်ပျော်, အအရက်သေစာသူတို့နောက်ကဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ အရောအနှောတဲ့ဖြီးနှင့်အတူပြန့်နှံ့နေပါတယ်, ဒါကြောင့်လည်းအအေးထဲမှာပလပ်စတစ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အစိုဓာတ်ရစေဘူးဖြစ်ပါတယ်။
ကြော် Guaga: ထင်းရှူးစေး - 400 ဂရမ်ဆိုဒါ - 1 Tsp, အရက်ပွတ်နယ် - 60 ml, သွားဖုံး - 4, အစေးအပူသည်, ထိုအရက်သေစာစဆက်ပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် .. ရေထဲမှာပျော်ဝင်သွားဖုံးနှင့်ဆိုဒါ, အပေါငျးတို့သပါဝင်ပစ္စည်းများရောထွေးဖြစ်ကြသည်။
Rajewski စာရွက်အားဖြင့်ဥယျာဉ်တော် var: rosin - အရက်ပွတ်နယ် 500 ဂရမ် - 60 ml, linseed ရေနံ -2tbsp ။ ဇွန်း။ အဆိုပါဗဓေလသစ်တစ်ခုအရက်နှင့်ရေနံရမညျဖြည့်စွက်, အနိမ့်အပူချိန်မှာထိုးယပ်ခတ်။
ဥယျာဉ်တော် var - ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့?
Promazyvat ထင်းမနာလိုအပ်ချက်များကို - အားလုံးခြောက်သွေ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အပိုငျးကိုပယ်ဖြတ်ထားရပါမည်။
အချပ်ကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့ processing မတိုင်မီသန့်စင်။
Tools များ, အလုပ်မတိုင်မီလက်တို့သည်အရက်အတူ decontaminated ရပါမည်။
ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ကြေးနီ sulfate ၏ 2% solution ကို promazyvayut ။
သိပ်သည်းဆများပလပ်စတစ်ပျော့ပြောင်းမှအေးခဲခြံ var - အိုးရေပူထဲတွင်နေရာခဲ့သည်။
အနာ၏ကုသမှုများအတွက်သစ်သား spatula သို့မဟုတ်ဖြီးသုံးစွဲဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသသို့ကျော်နံ့သာဆီတစ်ပုံစံတည်း 3-5 မီလီမီတာ smear အလွှာ။
အဘယ်အရာကိုထိုဥယျာဉ်ကို var ကိုအစားထိုးနိုင်သလဲ
သင့်လျော်သောပါဝင်ပစ္စည်းများမဟုတ်ပါဘူးသင်သည်သစ်ပင်များအတွက်အနာထပိတ်လိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥယျာဉ်နှင့်လက်ပေါ်လျှင်, သင်သည်အခြား PuTTY ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကောင်းသောအစားထိုးဥယျာဉ်ကို TVG - ရွှံ့ဖြင့်ရေးစပ်သီကုံး, dressings သည်, ဆေးသုတ်, linseed ရေနံ။ သူတို့အတူတူရှိစစ်ဆင်ရေး၏နိယာမ - အနာရောဂါငြိမ်းစရာ, တီးရီးယားရောဂါပိုး, အနာရောဂါငြိမ်းစရာအနာ။ ရန်ပုံငွေကိုလည်းပျက်စီးဒေသများပေါ်တွင်ပြန့်နှံ့လျက်, သစ်သား spatula သို့မဟုတ်ဖြီးမှတဆင့်လျှော့ချနေကြသည်။ အစားထိုးဥယျာဉ်ကို TVG:
ရွှံ့အင်္ဂတေ။ ရွှံ့စေး၏ 200 ဂရမ် mullein ၏ 100 ဂရမ်နှင့်အတူရောထွေးခဲ့ကြ, အသေးစားကောက်ရိုးများနှင့်အနည်းငယ်ကြေးနီ sulfate ကဆက်ပြောသည်။ အရာအားလုံးအထူအချဉ်မုန့်သည်အထိရောထွေးနှင့်ဖြတ်မှလျှောက်ထားသည်။
မြေဆီလွှာတွင်စိမ်း။ အားလုံးမှာဘာမျှမလက်မှာမဟုတျပါဘူးလျှင်သင်မြေကြီးသားတစ်ဦးစိမ်းကို ယူ. ၎င်းတို့၏ဆေးကုသမှု site ကိုဖုံးလွှမ်းသောအထည်ကိုထိပ်အပိုင်းကိုပိတ်ပါနိုင်ပါတယ်။
polyethylene ။ ဒါဟာရောဂါပိုး၏ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်မှုကနေဖြတ်တားဆီးပါလိမ့်မယ်။ Cellophane တင်းကျပ်စွာတစ်ခါတစ်ရံဒီသစ်ပင်များကို restore ဖို့လုံလောက်ပါတယ်, အကျိုးစည်ဖုံးလှမျးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ပိုကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါသည် - ဥယျာဉ်အစေးသို့မဟုတ်ဆေးသုတ်?
အတော်များများကဥယျာဉ်မှူးအစား linseed ဆီရေးစပ်သောသာမန်ရေနံ-based ဆေးသုတ်အဖြစ်သစ်ပင်များအပေါ်ဖြတ်တောက်မှုနှင့်အတူ vara အင်္ကျီကိုထိုဥယျာဉ်ကို။ ဒါဟာဖြီးအားဖွငျ့ပျက်စီးသွားသောဧရိယာမှလျှောက်ထားသည်။ ဒီနည်းလမ်းရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ flaking coating အချို့ကိုအချိန်နှင့်နောက်တဖန်ကုသခံရဖို့အနာပြီးနောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤအမှုကိုပြုသောမထားလျှင်, မိုးရေကနေသစ်သား, ကားပုပ်ပျက်တတ်ခြောက်သွေ့ရာသီဥတုစေခြင်းငှါ, ရလဒ်တစ်ဦးဆွန်းသည်။ ဒါဟာအသီး၏အရည်အသွေးကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟု, သစ်ပင်ဖျားနာရနိုငျသညျ, ငြိမ်ဝပ်ဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုမှာခံစားရပါလိမ့်မယ်။
Plasticine အစား vara ဥယျာဉ်တော်
နောက်ထပ်အစားထိုးဥယျာဉ်ကို vara - plasticine ။ ဒါဟာကောင်းစွာတင်းကျပ်စွာနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအနာစောင့်ရှောက်ခြင်း, ဒဏ်ရာရသူဧရိယာကာကွယ်ပေးသည်, အသကျရှငျတစ်ရှူးကိုပျက်စီးစေမထားဘူး။ ဥယျာဉ် var နှစ်စဉ် refresh ရန်ရှိသည်စဉ်ရွှံ့လောက်နှစ်နှစ်အဘို့ထိုသူတို့အပေါ်သိမ်းဆည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အနာ glossing ကိစ္စများတွင်အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ဆေး၏လယ်ပြင်တွင်, အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည် - အခေါက်ရှအောက်မှာစီးဆင်းမခွဲစိတ်ရာအရပ်ကနေယိုမထားဘူး။
အဆိုပါအင်္ဂတေကို cut အပေါ်ကျရောက်မယ်ဆိုရင်ပြီးနောက်ရှိသမျှသည်ကာကွယ်ဆေးကိုဆင်းအခြေချမည်မဟုတ်ပါ။ ရွှံ့ပေါ်ပန်းချီခင်မှာသင်တို့ကိုအကောင်းတစ်ဦးလမ်းပိုင်းမိမိတို့လက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု, ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးပင်ပိုမိုအဆင်ပြေသာမန်ဥယျာဉ်ကို Vara ခုနှစ်, နေသမျှကာလပတ်လုံးကတက်နွေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ site ကိုကနေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်မထားဘူး။ ထို့ကြောင့်, ရွှံ့စေး၏အသုံးပြုမှုကိုဥယျာဉ်တော် PuTTY အဖြစ်အတော်လေးတရားမျှတဖြစ်ပါတယ်။
Kobe မြို့ Laz - အမျိုးအနွယ်ကိုအနေဖြင့်ကြီးထွားလာ
Perfoliate Honeysuckle - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Phalaenopsis - မျိုးပွား
လွင်ပြင်၌ခရမ်းချဉ်သီး ripening အရှိန်မြှင့်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Aporia Crataegi - ထိန်းချုပ်မှုအစီအမံ
Black က Raspberry - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
ဆလရီအမြစ် - ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ကောင်းတစ်ဦးစပါးရိတ်ရာကာလ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ
တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်အခြား parameters တွေကို Swinton
Dolce Gabbana - Fall-ဆောင်းရာသီ 2015-2016
ရေကူးဝတ်စုံ - အင်္ကျီ 2014
အိမ်တွင် propolis တစ် tincture အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
တပ်ဦး - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ကုသမှု
အမျိုးသမီးဖက်ရှင် tracksuits 2014
Kvass - နွေရာသီအချိုရည်များအတွက်အများဆုံးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများ
Reishi မှို - ကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
"ငါသည်သင်တို့၏ထူးခြားမှုကိုဖျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်!" - သည်သူ၏မျက်နှာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့မှဲ့တွေနဲ့ dancer ခွဲစိတ်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်
အစားအသောက် "အတိတ်ကာလတစ်လ 10 ကီလိုဂရမ်"